Izindaba - Inqubo Yokukhiqiza Ingilazi Yebhodlela
Okukhulu Izinhlobo zeNgilazi:
Thayipha I - Ingilazi Ye-Borosilicate
Uhlobo II - I-Glass Soda Lime Glass
Uhlobo lwe-III - Ingilazi ye-Soda Lime
Izinto ezisetshenziselwa ukwenza ingilazi zifaka cishe u-70% wesihlabathi kanye nengxube ethile yomlotha we-soda, i-limestone nezinye izinto zemvelo - kuya ngokuthi yiziphi izakhiwo ezifiselekayo kwi-batch.
Lapho kwenziwa ingilazi ye-lime lime, ingilazi ephukile, eyenziwe kabusha, noma i-Celet, isithako sokhiye esingeziwe. Inani le-Celet esetshenzisiwe ku-batch yengilazi liyahlukahluka. I-Cullet iyancibilika emazingeni okushisa aphansi anciphisa ukusetshenziswa kwamandla futhi idinga izinto ezimbalwa ezingavuthiwe.
Ingilazi ye-Borosilicate akufanele ivuselelwe ngoba ingilazi engamelana nokushisa. Ngenxa yezakhiwo zayo ezingahambisani nokushisa, ingilazi ye-borosilrate ngeke incibilike emazingeni okushisa afanayo nengilazi ye-Soda Lime futhi izoshintsha ukuvela kukamanzi esithandweni somlilo ngesikhathi sesigaba sokuncibilika kabusha.
Zonke izinto zokusetshenziswa zokwenza ingilazi, kufaka phakathi i -letlet, zigcinwa endlini ye-batch. Zibe sezidonswa endaweni enesisindo nokuxuba bese ekugcineni ziphakanyiswa zibe ngama-batch hoppers anikeza izingilazi ezihlinzekwayo.
Izindlela Zokukhiqiza Iziqukathi zeNgilazi:
Ingilazi Eshaye Igolide yaziwa nangokuthi ingilazi ebunjiwe. Ekwenzeni ingilazi eshaywayo, amagwegwe engilazi evuthayo evela esithandweni aqondiswa emshinini wokubumba nasemithanjeni lapho umoya uphoqelelwa khona ukuthi ukhiqize umumo nentambo ejikelezayo yesitsha. Uma esebunjiwe, abese eyaziwa ngokuthi yiParison. Kunezinqubo ezimbili ezihlukile zokwakha ukwakha isitsha sokugcina:
Inqubo yeBlow & Blow - kusetshenziselwa iziqukathi eziwumngcingo lapho kwakhiwa khona parison umoya ocindezelwe
Cindezela futhi uBhalise inqubo- isetshenziselwe iziqukathi ezinkulu zobubanzi lapho isigaxa sakhiwe ngokucindezela ingilazi sibhekene nesikhunta esingenalutho ngenhlamvu yensimbi
Ukugcoba Ingilazi kwakhiwa inqubo eqhubekayo yokudweba kusetshenziswa izinqubo zeDanner noma zeVello ukufeza ububanzi nobukhulu obukhulu. Ingilazi idonswa ngaphezulu komugqa wabasizi abasebenza ngemishini yokudweba.
Inqubo yeDanner - Ingilazi igeleza ivela esithandweni somlilo ngaphambili
Inqubo yeVello - Ingilazi igeleza isuka esithandweni esibona kusengaphambili ibe isitsha esibe sakhiwe
Izinqubo Zokwakha Ingilazi Ephuthukile
Inqubo yeBlow and Blow - umoya ocindezelwe usetshenziselwa ukwenza i-gob ibe yi-parison, emisa ukuqeda kwentamo futhi inikeze i-gob isimo esifanayo. I-parison bese idonselwa kolunye uhlangothi lomshini, bese kusetshenziselwa umoya ukuyishaya ifane nomsamo wayo oyifunayo.
Cindezela bese wenza inqubo- kuqala i-plunger, umoya bese kulandela ukwenza i-gob ibe yi-parison.
Ngesinye isikhathi le nqubo yayisetshenziselwa izitsha zomlomo obanzi, kodwa ngokufakwa kwenqubo yokusiza i-Vacuum, manje isingasetshenziselwa izinhlelo zomlomo omncane.
Amandla nokusatshalaliswa kusezingeni eliphezulu ngale ndlela yokwenziwa kwengilazi futhi kuvumele abakhiqizi ukuba "bangasindi" izinto ezijwayelekile ezinjengamabhodlela kabhiya ukuba balondoloze amandla.
Isimo -ngakhathalekile inqubo, uma sekuqediwe iziqukathi zengilazi eshayeziwe, iziqukathi zilayishwa ku-Annealing Lehr, lapho izinga lokushisa lazo libuyiswa lifinyelela cishe ku-1500 ° F, bese kuncishiswa kancane kancane libe ngaphansi kwama-900 ° F.
Lokhu kupholisa futhi ukupholisa kancane kunciphisa ukucindezelwa ezitsheni. Ngaphandle kwalesi sinyathelo, ingilazi belizophuka kalula.
Ukwelashwa Okungaphezulu - Kusetshenziswa ukwelashwa kwangaphandle ukuvimbela ukufuduka, okwenza ingilazi ithambekele ekuwohlokeni. Ukuhlanganiswa (imvamisa ingxube ye-polyethylene noma i-tin oxide) kufafazwa bese kufinyelela ebusweni bengilazi ukuze kwenziwe inhlanganisela ye-tin oxide. Lokhu kuhlanganiswa kuvimbela amabhodlela ukuthi anamathele komunye nomunye ukunciphisa ukwehlukana.
I-tin oxide coating isetshenziswa njengokwelashwa kokuphela okushisayo. Ukwelashwa kokuphela okubandayo, izinga lokushisa leziqukathi liyancipha laba phakathi kwama-225 no-275 ° F ngaphambi kokufaka. Lokhu kuhlanganiswa kungenziwa kugezwe. Ukwelashwa Okushisayo kusetshenziswa ngaphambi kwenqubo yokumisela. Ukwelashwa okusetshenziswe ngale ndlela kuhlangana ngengilazi, futhi akukwazi ukugeza.
Ukwelashwa Kwangaphakathi - Ukwelashwa Ngaphakathi kwe-Fluorination (IFT) inqubo eyenza ingilazi yohlobo lwe-Type engilazini yohlobo II futhi isetshenziswe engilazini ukuvikela ukuqhuma.
Ukuhlolwa kwekhwalithi - Ukuhlolwa Kwekhwalithi Yokushisa Esisha kufaka ukulinganisa isisindo sebhodlela kanye nokuhlola ubukhulu bebhodlela nge-go-go goges. Ngemuva kokushiya ukuphela okubandayo kwe-lehr, amabhodlela abese edlula emshinini wokuhlola we-elekthroniki othola ngokuzenzakalelayo amaphutha. Lokhu kufaka, kepha kungagcini lapho: ukuhlolwa kogqinsi kogqinsi, ukutholwa komonakalo, ukuhlaziya okuphathelene nobukhulu, ukuhlolwa kwendawo yokubopha, ukuskena kodonga oluseceleni kanye nokuskenwa kwesisekelo.
Ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-Lab Glass Defects kanye nendlela Yokuhlola Ukupakishwa Kwengilazi, sicela uchofoze lapha ukuze ufunde kabanzi bese ulanda inkomba yesethenjwa ukusiza ukuthola ukuthi ngabe udinga ukukhathazeka ngesici noma cha.
Izibonelo ze-Blow & Blow Containers
Amabhodlela weBoston Round
Amabhodlela weSampula Owoyela
Izibonelo ze-Press & Blow Container
Amabhodlela Wide Mouth Packer
Amabhodlela aseFrance esikwele
Amabhodlela Aphakathi Naphakathi
Tubular Glass Ukwenza Izinqubo
Amasayizi wokukhuphuka kusuka kububanzi obuyi-1,6mm kuye kuma-66.5mm
Ukudweba amanani afinyelela ku-400m ngomzuzu ngosayizi omncane
Ingilazi igeleza isuka esithandweni sangaphambi kwesithando ngesimo iribhoni, iwelele engxenyeni engenhla yomkhono othambekisayo, ophathwe umgodi noma umgobongo ojikelezayo.
Iribhoni isongwe ngomkhono ukuze yakhe ungqimba olubushelelezi lwengilazi, olugeleza phansi umkhono naphezu kwesihloko somgodi.
Ishubhu bese lidonswa ngaphezulu komugqa wabasizi abasebenza umshini wokudweba osendaweni efinyelela ku-120m kude.
Ubukhulu beshubhu bunqunywa njengoba ingilazi ibanda endaweni yayo yokubeka engxenyeni engasekelwa phakathi kwesigaba sokuqhuma kanye nomugqa wokuqala wokugibela.
Ingilazi igeleza isuka esithandweni sangaphambi kwesithando iqonde esitsheni lapho kufakwa khona i-mandrel ebheke phezulu noma insimbi ezungezwe yindandatho yezinhlaka.
Ingilazi igeleza phakathi kwesikhala esiyi-annular phakathi kwensimbi nendandatho bese ihamba ngaphezulu komugqa wama-rolling emshinini wokudweba ongafika ku-120m kude.
Ukulawulwa Kwekhwalithi ye-Tube Draw
Lapho amashubhu esephothuliwe, enza izivivinyo eziningi nokuhlolwa ukuze aqinisekise ukuthi ahambisana namazinga asezingeni elifanele. Ukuhlolwa okubukwayo kwenziwa ngohlelo lwekhamera eliphezulu, lesinqumo esiphakeme lokususa isici. Lapho sekwenziwe futhi kwasikwa ukwakheka okulungile, ubukhulu buqinisekisiwe.
Izibonelo ze-Tubing Glass